Dawlada Somaliya Oo ka Noqotay Go'aankii ay Hore Uga Qaadatay Ardayda Puntland.(Sawiro) -
Dawlada somaliya ayaa ka noqotay go’aankii shahaadooyinka loogu diiday ardayda dhamaysatay dugsiyada sare ee Puntland, kadib markii Masuuliyiin uu horkacayay Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Sadiiq Xirsi Warfaa iyo Xildhibaannada Golaha Shacabka ee kasoo jeeda Puntland ay maanta cabasho dhinaca ardayda ula tageen Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre.
Kulanka ay masuuliyiinta kasoo jeeda Puntland ay la qaateen Wasiirka waxbarashada ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii xal loogu heli lahaa cabashada Ardayda Puntland ee shahaahada Dugsiga sare.
Wasiir Goodax oo cabashadan ka hadlayay ayaa yidhi “Waxaa maanta xafiiskeyga kulan kula qaatay xildhibaanada ugu muhiimsan ee kasoo jeeda deegaanada Puntland…Waxaan kawada hadalnay sidii ardayda Puntland ee sannad dugsiyeedkii 2018/2019 imtixaankoodii la siyaasadeeyay ay u heli lahaayeen shahaadada Dowladda Federaalka Soomaaliya. Waxaa farxad ii ah in ugu danbeyntii aan isla garannay xal oo aan dib idinkala wadaagi doono.”
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Sadiiq Warfaa ayaa uga mahadceliyay wasiirka waxbarashada ballanqaadka ku aaddan inay Ardaydu heli doonaan shahaahada dugsiga sare,isaga oo markaa caddeeyay inuu labbo laabi doono dadaallada xalka kama dambeysta ah looga gaarayo cabashada shahaadada ee Ardayda Puntland.
Sikastaba ha ahaatee boqolaal kamid ah Ardayda Sanadkaan ka qalin Jebisay dugsiyada degaanada Puntland oo Muqdisho u yimid sidii ay u qaadan lahaayeen Shahaadada ayaa dib ugu laabtay degaanada Puntland kadib markii loo sheegay in aysan heli doonin Shahaadada, ilaa ay Puntland ogolaato in imtixaanka mideysan ee Qaranka ka qayb-qaadato, iyagoona lagu amray in ay dib ugu laabtaan Puntland iyo degaanadii ay ku yimaadeen.
Shirkadda Telesom Oo Si Mug Leh Uga Qayb-Qaadatay Shirweynaha Horumarinta Tiknoolajiyada Somaliland